पहाडमा पुराना गाडी : सरकार कति जाली ! « प्रशासन
पहाडमा पुराना गाडी : सरकार कति जाली !
प्रकाशित मिति : 8 October, 2018 12:45 pm
काठमाडौं । सरकारले २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन पहाडमा चलाउन दिने तयारी गरेको छ । सरकारले यस्ता गाडी पहाडमा चलाउन दिने निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइसकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले गाडी काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्य क्षेत्रमा गाडी चलाउन दिने तयारी गरिएको हो । उनले भने, ‘यसबारे मन्त्रीज्यूले निर्णय गर्नुभएको हो । उक्त मिटिङमा म नभएकाले यसबारे त्यति जानकारी छैन ।’
उनका अनुसार सुरुमा साविकको पूर्वाञ्चल पहाडमा ल्यान्ड रोबर गाडी चलाउन दिने तयारी गरिएको थियो । ‘ल्यान्ड रोबर त्यहाँको लाइफ लाइन नै मानिन्छ । ती गाडी चलेनन् भने पूर्वी पहाडमा हाहाकार नै हुन्छ,’ उनले भने ।
तर, पछि अन्य व्यवसायीले पनि आफ्ना गाडी चलाउन दिनुपर्ने आग्रह गरेपछि पहाडमा २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन दिने निर्णय गरिएको उनले सुनाए ।
यो निर्णयमा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने कतिपयको आशंका छ । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भने आर्थिक चलखेल नभएको दाबी गर्छन् ।
यस्ता गाडीले दुर्घटनाको जोखिम बढाउन सक्ने ट्राफिक प्रहरीहरू बताउँछन् ।
ल्यान्ड रोबर गाडी पूर्वाञ्चल पारि दार्जिलिङमा पनि चल्ने गरेका छन् । यसले त्यहाँको पर्यटन पनि प्रवर्द्धन भएको छ । ‘पूर्वाञ्चलका व्यवसायीले २० वर्ष पुराना गाडी हटाए पर्यटन प्रवर्द्धनमा नकारात्मक असर पर्ने भनेपछि मन्त्रीज्यू सहमत हुनुभएको होला,’ उनले प्रष्ट्याए ।
यसअघि सरकारले पुराना गाडीले प्रदूषण बढाएको भन्दै २०७४ चैत १ गतेदेखि मुलुकभर २० वर्ष पुराना गाडी संचालनमा रोक लगाइएको थियो ।
शहरी क्षेत्रमा प्रदुषण भयो भनेर हटाइएका गाडी पहाडी क्षेत्रमा पठाइनु कति जायज छ ? अनि जहाँ बाटोघाटोकै कारण पनि चुस्त दुरुस्त सवारीको चाहिन्छ त्याहाँ पुराना गाडी पठाइनु ठिकै हो त ?
Tags : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री